Dressing Elegant Bohemian - Buddhatrends
Dress Elegant Bohemian Dress
$96.80 $121.00 Manavotra 20% ($24.20)
Blue / Blue Navy
Mitady akanjo marevaka sy marefo ve ianao amin'ny daty fisakafoanana mamy? Na mety mila manao akanjo hariva amin'ny sambo manaraka ny Bahamas ianao. Ity lavaka lava draping lava sy lamba rongony ity dia mamelana tsara ny vatanao izay mamorona fijery vehivavy sy tsara. Manana fehiloha sy paosy fohy izy io, tonga lafatra amin'ny toetr'andro amin'ny lohataona sy fahavaratra. Ny taratasy mendri-kaja tsara tarehy dia mamorona ahitra any Azia. Ampio perla perla ao anatin 'ny tendany lava V sy kiraro malefaka kisary tsara tarehy.
Material:Synthetic Seza / Linen
E * ny K.
Tena tsara tarehy. Raha tsy amin'ny sary, fa ny mari-pamantarana nasehon'ny mpivarotra dia marina sy marina. Recomended !!! Tena tsara tarehy tsara.
O ** ny A.
T ***** ny P.
Ny akanjo mifanaraka amin'ny sary dia mitovy amin'ny sary. dia mipetraka malalaka eo amin'ny tarehimarika 96-80-104 ny fitomboan'ny 164 cm lavitr'ezaka. Ny akanjo dia mandrakotra lamba mainty maivana, fa malefaka. Araka ny hevitro, ny rehetra-ny synthetics, fa mahafinaritra ny fehy. Mipoitra be ny akanjo. Misaotra mpivarotra!) Manoro fananana aho.
Hippie Dresses $89.00
Loose 90s ho an'ny vehivavy rehetra
Loose 90s ho an'ny vehivavy rehetra $32.40 $54.00
Dress Bohemian Dressed Up
Dress Bohemian Dressed Up $40.20 $67.00
Plus Size T-shirt Dress $48.00 $60.00
The Artistic Way To Dress Dress
The Artistic Way To Dress Dress $121.00
Manao akanjo tsy maotina Maxi
Manao akanjo tsy maotina Maxi $89.00
Blue Peacock Chiffon Dress Boho Maxi
Blue Peacock Chiffon Dress Boho Maxi $53.40 $89.00